Doorashada Qasabada Jikada Saxda ah
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Doorashada Qasabada Jikada Saxda ah
2020 / 10 / 21 QoondayntaTilmaamaha qasabada 4471 0
Ma go’aansatay inaad dib u habayn ku samayso jikadaada? Xitaa haddii aad kaliya siinayso aagga jikada jikada wax cusbooneysiin ah, bedelida qasabadda jikadaada waa casriyayn oo si fudud lagu fulin karo. Si kastaba ha noqotee, iyada oo leh noocyo badan oo kala duwan, dhammeystiran, iyo kharashka qasabadda qasabadda jikada laga heli karo suuqa maanta, sidee ku go'aansan kartaa midka saxda ah? Xulista tuubada jikada cusub waxay noqon kartaa hawl caajis ah haddii aadan si sax ah u aqoon waxa aad rabto. Aynu ku bilowno inaan eegno 7 nooc oo kala duwan oo qasabadaha jikada ah, ka dibna waxaan taaban doonnaa tixgelinta kale ee la sameynayo markii la dooranayo qasabada saxda ah ee jikada.
Muujinta madax fiiqan, qasabadaha jikada jiidaya ayaa u oggolaanaya dhaqdhaqaaq ballaaran. Waxay ku siinaysaa inaad marin u hesho socodka caadiga ah ama xulashada buufinta. Tani waxay u sahlaysaa inay gaarto dhammaan geesaha saxanka, moodellada qaarna waxay u oggolaadaan inuu soo gaaro miiska dushiisa si ay u siiso marin ay ku buuxiso dheriga laga yaabo inuu aad u ballaaran yahay oo uusan ku habboonayn saxanka. Qasabadaha-soo-baxa badanaa waxay leeyihiin hal gacan, markaa waxaad u isticmaali kartaa hal gacan si aad u maamusho socodka biyaha iyo heerkulka adoo gacanta kale ka jiidaya tubada.
Tuubbooyinka tubbada jiida
Xulasho wanaagsan oo lagu dhaqo suxuunta, qasabadaha jiifku hoos u jiido waxay muujinayaan qurxin qurux badan oo gooseneck ah Tubooyinkaani waa kuwo caan ku ah sabab macquul ah. Hoos u soo jiido qasabadda jikada ayaa fududeyneysa in biyaha loo oggolaado inay gaaraan gees kasta oo waaskada ah, iyo sidoo kale inay galaan meel kasta oo ka mid ah dheryahaaga iyo weelashaada markii aad dhaqeysid. Madaxooda go'an ayaa hoos u soo jiidaya, laakiin dibedda uma soo baxaan, sida qasabadda jiida oo kale. Sababtaas awgeed, haddii aad dooratid qasabad hoos u soo jiidaya, waxaa ugu wanaagsan inaad haysato saxan qoto dheer. Haddii saxankaagu aad u hooseeyo, waxaad u badan tahay inaad ku daadinaysid biyo naftaada oo dhan.
Fududeeyeyaasha Hal-Gacan ah
Tuubbooyinka jikada ee hal-gacan lagu qaado ayaa leh naqshad gooseneck ah, oo leh hal gacan oo caadi ahaan dhinac u socota. Gacanta keliya ayaa si fudud looga dhaqaajiyaa dhinac ilaa dhinaca kale si loo beddelo heerkulka biyaha. Faa'iido darrada ayaa ah inay noqon karto mid xasaasi ah oo ay adkaan karto in biyaha la gaarsiiyo heerkulka saxda ah ee aad u baahan tahay. Si kastaba ha noqotee, faa'iidooyinka qasabadaha hal-gacan ayaa ah inay yihiin kuwo aad loogu kalsoonaan karo, fududahay in la xalliyo markii loo baahdo waxayna leeyihiin qaab casri ah, qurux badan. Haddii aad go'aansato qasabad hal-gacmeed ah, hubi inaad doorato mid leh muuqaal dheer, si aad ugu habboonaato dheryahaaga dhaadheer iyo weellada hoosta tuubada.
Tuubbo laba gacmood leh ayaa badanaa lagu arkaa jikada maanta. Mid ka mid ah xamilku waa kuleyl, kan kalena waa qabow, iyo qulqulka ayaa ku yaal bartamaha. Qaabku wuxuu ku habboon yahay ku dhowaad wixii naqshad jikada ah marka dhammaystirka ku habboon la doorto. Marka gacmaha la kala saaro, waxaad helaysaa biyo kulul si dhakhso leh, iyo sida kuleylka iyo qabowga loo kala sooco, waxaad awood u leedahay inaad hesho heerkulka biyaha sida saxda ah ee aad rabto. Cilladaha kaliya ee jira ayaa ah in labada gacmood, aad ubaahantahay inaad isticmaasho labada gacmood si aad uhesho heerkulka ama aad u isticmaasho hal gacan si aad ugudhaqaaqdo labada gacmood haddii aad mashquul ku tahay wax kariska.
Tuubbo Aan Taabasho Laheyn
Kaamil ahaan dhammaystirnaanta karinta halista ah, qasabadaha jikada ee aan taabashada lahayn waxay ku daaraan mowjad fudud oo gacantaada ah. Waxay shaqeeyaan markay dareemayaal yaryar kiciyaan socodka biyaha markaad ruxruxdo dheri ama gacantaada horteeda. Jawaab weyn ayey u tahay dhibaatada gacmahaaga ay ka wasakheeyeen taabashada hilibka cayriin, tusaale ahaan. Si kastaba ha noqotee, waa in la ogaadaa in si aad adigu u hagaajiso heerkulka iyo socodka biyaha, waxaad u baahan doontaa inaad taabato taabashada, salka. Khasaaraha kaliya ee la sheegi karo ee qasabadda jikada ee aan taaban karin ayaa ah inay la timid qiimo qaali ah.
Goobtu waa wax walba. Waxyaabaha aadka loo xuso ee buuxinta dheriga ayaa ah inay ku taallo aagga dhabarka dambe ee shooladda jikadaada. Ku habboon sida ay noqon karto, haysashada dheriga dheriga ayaa baabi'inaya baahida loo qabo in la buuxiyo dheriga culus ee saxanka ka dibna loo sii qaado kariyaha. Dheeraad ah, maxaa ka faaiido badan inaad haysato ilo biyo oo dheeraad ah jikadaada? Tani waxay ka dhigan tahay inaad u isticmaali kartid dheriga dheriga wax lagu karsado, iyo tubbada jikada ee caadiga ah ee aad ku karinaysid saxamada ama ku dhaqaysid gacmahaaga. Cilladaha kaliya ee jira ayaa ah in buuxiyeyaasha dheriga ay guud ahaan ku yaalliin meel ka fog tuubbada saxanka, sidaa darteed waxay badanaa u baahan yihiin in lagu rakibo xirfadle.
Qasabadaha Casriga ah
Haddii aad raadineyso ikhtiyaarka ugu raaxada badan tuubbooyinka jikada, ha uga sii fogayn qasabadaha casriga ah. Tuubada casriga ah waxay dhageysataa waxa aad u sheegeyso inay sameyso waxayna raacdaa tilmaamahaaga. Waxaad u sheegtaa inay daarto oo hesho heerkul gaar ah, wayna dhacdaa. U sheeg inaad u baahan tahay koob biyo ah, waxayna cabiraysaa inta saxda ah. Qasabadaha Smart-ka ah waxay la yimaadaan dhamaan noocyada astaamaha qurxoon sida bandhigyada dhijitaalka ah iyo hawlgallada gacmo-la'aanta ah. Asal ahaan, waa ikhtiyaarka ugu dambeeya uguna qiimaha badan ee kariyaha halista ah.
Si aad u doorato qasabadda saxda ah ee jikada, waxaad u baahan tahay inaad go'aansato sida qasabadda loo rakibayo. Waa kuwan saddexda goobood ee la tixgelinayo:
Hore:: Sidee loo doortaa oo loo iibsadaa tuubada biyaha kulul ee degdega ah? Next: Maxay u kala duwanyihiin inta udhaxeysa $ 30 iyo $ 300 qasabada biyaha?
Qaab dhismeedka iyo soosaarida qasabada madow
2021 / 01 / 10 652
Tilmaamaha sida loo doorto tuubada musqusha ee saxanka wanaagsan
2021 / 01 / 10 451
Talaabooyinka Hagaha oo Dhamaystiran Sida Loogu Rido Giraanta Tuwaalka
2020 / 12 / 21 4836
Siyaabaha u horseedaya xulashada qasabadda qasabadda jikada ugu fiican
2020 / 11 / 19 4191
Talaabo Talaabo Talaabo ah oo ku saabsan Dayactirka iyo Sida Loogu Iibsado Qasabadaha qasabadaha khadka tooska ah
2020 / 11 / 19 3799
SIDEE LOOGU DOORAN KARAA QAADKA BATHROOM-KA
2020 / 11 / 18 4131
NALA SOO XIRIIR Cinwaanka Mareykanka: 8 GREEN STE A, KENT, DOVER CITY, DE, 19901. USA TEL: 3476134901 Emayl: sales@wowowfaucet.com